ပရာဘတ်စ် - ဝီကီပီးဒီးယား
၂၀၁၅ ခုနှစ် Baahubali ရုပ်ရှင်မိတ်ဆက်ပွဲတွင် ပရာဘတ်ကို တွေ့ရစဉ်
(၁၉၇၉-၁၀-၂၃) အောက်တိုဘာ ၂၃၊ ၁၉၇၉ (အသက် ၄၂)
၂၀၀၂ ခုနှစ် – လက်ရှိအချိန်အထိ
Krishnam Raju Uppalapati (ဦးလေး)
ပရာဘတ်စ် (အင်္ဂလိပ်: Prabhas; Venkata Satyanarayana Prabhas Raju Uppalapati အမည်ဖြင့် အောက်တိုဘာလ ၂၃ ရက်၊ ၁၉၇၉ တွင် မွေးဖွား) သည် အိန္ဒိယရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင်အဖြစ် Telugu ရုပ်ရှင်လောက တွင် ကောင်းစွာထင်ရှားသည်။ Prabhas သည် ပွဲဦးထွက်အနေဖြင့် ၂၀၀၂ ခုနှစ်၌ Eshwar ဒရမ်မာရုပ်ရှင်တွင် စတင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင် Varsham (၂၀၀၄), Chatrapathi (၂၀၀၅), Chakram (၂၀၀၅), Billa (၂၀၀၉), Darling (၂၀၁၀), Mr. Perfect (၂၀၁၁) နှင့် Mirchi (၂၀၁၃) တို့တွင်လည်း ပါဝင်ခဲ့သည်။ Prabhas သည် ပြည်နယ်ဆုဖြစ်သည့် Nandi Award for Best Actor ဆုကို Mirchi  ရုပ်ရှင်ဖြင့် ရရှိခဲ့သည်။ သူသည် Bollywood သီချင်းတစ်ပုဒ်၊ Prabhudeva ၏ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ရုပ်ရှင် Action Jackson တွင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် Prabhas သည် ဒါရိုက်တာ S. S. Rajamouli ၏ အောင်မြင်ကျော်ကြားသော Baahubali: The Beginning (၂၀၁၅) ရုပ်ရှင်တွင် ခေါင်းစဉ်ဇာတ်ဆောင်နေရာက ပါဝင်ခဲ့သည်။ (အဆိုပါရုပ်ရှင်သည် အိန္ဒိယရုပ်ရှင်သမိုင်းတွင် အလွန်အကျွံအားပေးခံရသော ဇာတ်ကားအဖြစ် စတုတ္ထနေရာတွင် ယနေ့အချိန်အထိ ရပ်တည်နေသည်) Prabhas သည် အထက်ဖော်ပြပါ ရုပ်ရှင်၏ အဆက်ရုပ်ရှင်ဖြစ်သော Baahubali 2: The Conclusion (၂၀၁၇) တွင် ထပ်မံပါဝင်လာခဲ့ပြီး အဆိုပါရုပ်ရှင်သည် ၁၀ ရက်အတွင်း ₹1000 crore ကျော် (US$155 million) ဝင်ငွေရရှိသော ပထမဆုံး အိန္ဒိယရုပ်ရှင် ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ယနေ့အချိန်အထိ အလွန်အကျွံ အားပေးခံရသော အိန္ဒိယရုပ်ရှင်ဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ 
၃ ရိုက်ကူးခဲ့သော ဇာတ်ကားများ
Prabhas ကို ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူ U. Suryanarayana Raju နှင့် ဇနီး Siva Kumari တို့က မွေးဖွားသည်။ သူသည် သားသမီး ၃ ယောက်တွင် အငယ်ဆုံးဖြစ်ပြီး အစ်ကိုမှာ Pramod Uppalapati ဖြစ်၍ အစ်မမှာ Pragathi ဖြစ်သည်။ သူ၏ ဦးလေးသည် Telugu သရုပ်ဆောင် Krishnam Raju Uppalapati ဖြစ်သည်။ Prabhas သည် DNR School, Bhimavaram တွင် တက်ရောက်ခဲ့ပြီး B.Tech. ဒီဂရီဘွဲ့ကို Sri Chaitanya College, Hyderabad မှ ရရှိခဲ့သည်။ 
Prabhas သည် သူ၏ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် အလုပ်ကို Eshwar ဖြင့် ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် Raghavendra ၌ အဓိက ဇာတ်ဆောင်နေရာဖြင့် ပါဝင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် Varsham ၌ ပေါ်လာခဲ့ပြန်သည်။ ဆက်လက်၍လည်း Adavi Raamudu နှင့် Chakram တို့တွင် ပါဝင်ခဲ့ပြန်သည်။
သူသည် ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် စိတ်ကူးယဉ် ဟာသရုပ်ရှင် Darling နှင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် အခြား စိတ်ကူးယဉ် ဟာသကားဖြစ်သော Mr. Perfect တို့ဖြင့် ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် Prabhas သည် Rebel တွင် သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ဒါရိုက်တာ Raghava Lawrence ရိုက်ကူးသည့် အက်ရှင်ကားဖြစ်သည်။ သူ၏ နောက်ထပ်ရုပ်ရှင်မှာ Mirchi ဖြစ်သည်။ သူသည် Denikaina Ready ရုပ်ရှင်တွင်လည်း ဧည့်သည်သရုပ်ဆောင်အဖြစ် အသံသွင်းခဲ့သေးသည်။.
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် သူသည် Shivudu/Mahendra Baahubali နှင့် Amarendra Baahubali တို့အဖြစ် S.S. Rajamouli ၏ ထင်ရှားကျော်ကြားသော Baahubali: The Beginning တွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါရုပ်ရှင်သည် အိန္ဒိယတွင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း အောင်မြင်သော တတိယ ရုပ်ရှင် ဖြစ်လာခဲ့ပြီး ဝေဖန်မှုများနှင့် စီးပွားရေးအရ ချီးကျူးမှုများ ကမ္ဘာအနှံ့ရှိခဲ့သည်။
Baahubali: The Beginning ရုပ်ရှင်၏ နောက်ဆက်တွဲ ရုပ်ရှင်ဖြစ်သော Baahubali: The Conclusion ကို ဧပြီလ ၂၈၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာအနှံ့ ဖြန့်ချိခဲ့သည်.
၂၀၀၂ Eeshwar Eeshwar Telugu
၂၀၀၃ Raghavendra Raghavendra Telugu
၂၀၀၄ Varsham Venkat Telugu
၂၀၀၄ Adavi Ramudu Ramudu Telugu
၂၀၀၅ Chakram Chakram Telugu
၂၀၀၅ Chatrapathi Siva / Chatrapathi Telugu
၂၀၀၆ Pournami Shiva Keshava Telugu
၂၀၀၇ Yogi Eeshwar Prasad / Yogi Telugu
၂၀၀၇ Munna Munna Telugu
၂၀၀၈ Bujjigadu Bujji / Linga Raju / Rajnikanth Telugu
၂၀၀၉ Billa Billa / Ranga Telugu
၂၀၀၉ Ek Niranjan Chotu Telugu
၂၀၁၀ Darling Prabhas / Prabha Telugu CineMaa award for Best actor (Jury)
၂၀၁၁ Mr. Perfect Vicky Telugu
၂၀၁၂ Rebel Rishi Telugu
၂၀၁၂ Denikaina Ready Telugu Narrator
၂၀၁၃ Mirchi Jai Telugu Nandi Award for Best Actor
၂၀၁၄ Action Jackson Himself Hindi Guest appearance in "Punjabi Mast" song 
၂၀၁၅ Baahubali: The Beginning Mahendra Baahubali/Shivudu
၂၀၁၇ Baahubali 2: The Conclusion Telugu / Tamil
၂၀၁၈ Saaho N/A Telugu / Tamil / Hindi 
↑ 15 Interesting Facts About Prabhas You Should Know Before Calling Yourself His Biggest Fan!။ Indiatimes.com (13 May 2017)။ 14 May 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “His full name is .”
↑ Baahubali creates history with opening day collections။ India Today (11 July 2015)။
↑ "India's most expensive film?"၊ 15 July 2013။ 20 May 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 26 December 2018။
↑ Bahubali wins national award for Best Film.
↑ 'Baahubali' Zooms Past 'Dhoom', Now India's All Time #3။ Forbes။
↑ Mike McCahill (12 July 2015)။ Baahubali: The Beginning review – fantastic bang for your buck in most expensive Indian movie ever made။ the Guardian။
↑ Bahubali2Hits 1000 Crore Worldwide In Ten Days။
↑ "Prabhas' Biography"၊3May 2005။ Archived from the original on5March 2005။
↑ "Prabhas' birthdayafamily affair"၊ 24 October 2011။ Archived from the original on 30 December 2011။
↑ "Prabhas Profile"၊ 25 December 2005။
↑ Chatrapati – Telugu cinema – 100 days centers – Prabhas & Shriya Archived 13 September 2015 at the Wayback Machine..
↑ Sashidhar AS။ "Denikaina Ready audio on Sep 23"၊ 12 September 2012။
↑ It's official! Baahubali2to hit the screens on April 28, 2017။ Hindustan Times (5 August 2016)။ 16 August 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Prabhudeva – Ajay Devagn Action Jackson (Hindi) (2014) (4 December 2014)။
↑ Prabhas-Rajamouli Movie Announced (18 February 2011)။
↑ Sashidhar AS။ "Rajamouli-Prabhas' film is titled Bahubali"၊ 13 January 2013။
↑ "Baahubali Prabhas’s next film is Saaho, will have action by Transformers’ stuntman" (in en)၊ hindustantimes၊ 2017-04-23။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ပရာဘတ်စ်&oldid=669505" မှ ရယူရန်
အိန္ဒိယ အမျိုးသား သရုပ်ဆောင်များ
ဤစာမျက်နှာကို ၈ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၁၂:၄၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။